पहिलो रोजाइमा कोदोको ढिँडो ! – Khabarhouse
पहिलो रोजाइमा कोदोको ढिँडो !
Khabar house | १२ माघ २०७६, आईतवार १६:२४ | Comments
बागलुङ, माघ १२ गते । ताराखोला गाउँपालिकाले घरवास पर्यटनलाई बढावा दिएको छ । विसं २०७७ लाई ‘भ्रमण वर्ष’ घोषणा गरेको गाउँपालिकाले यही वर्ष गाउँपालिकाभित्र चार घरवास (होमस्टे) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। दुई घरवास मा गाउँपालिकाको आफ्नै लगानी छ । गत आवमा घरवास सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले रु १० लाख बजेट छुट्याएको थियो ।
विनियोजित रकमले वडा नं २ अर्गलमा ‘किकल्टा घरवास’ र वडा नं ५ ठूलोहिलेमा ‘हिले घरवास’ शुरुआत भएको थियो । अर्गलमा सात घर र ठूलो हिलेका पाँच घरमा घरवास सेवा छ। यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा वडा नं ४ छम्टुमा ‘ताराखोला बहुउद्देश्यीय सामुदायिक रेम्बो ट्राउट घरवास’ र वडा नं ५ मा ‘सीप सामुदायिक घरवास’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
दुवै घरवासका लागि प्रदेश सरकारले रु १० लाखका दरले अनुदान दिएको थियो । गाउँ पापालिकाको लगानीमा खुलेका दुई घर वासका लागि समेत यो वर्ष प्रदेश सरकारबाट अनुदान ल्याउन पहल भइरहेको छ। “गत वर्ष दुवै होमस्टेलाई पाँच÷पाँच लाख अनुदान दियौँ, यो वर्ष स्तरोन्नतिका लागि केही बजेट छ”, गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीमगरले भन्नुभयो । गाउँपालिकाले सिकाइ र अनुभव आदान प्रदानका लागि अघिल्लो महिना घरवास सञ्चालकलाई अध्ययन भ्रमणसमेत गराएको थियो ।
स्याङ्जाको सिरुबारी, लमजुङको घलेगाउँ र तनहुँको बन्दीपुर घरवासको भ्रमण गरिएको ‘किकल्टा घरवास’ सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष केशकुमारी घर्तीमगरले जानकारी दिनुभयो। “भ्रमणबाट धेरै कुरा सिकियो, घरवास कस्तो हुनुपर्छ, पाहुनाको सत्कार कसरी गर्ने भन्ने जानियो”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार ‘किकल्टा’ घरवासमा आउने पाहुना÷पर्यटकले स्थानीय खानाका परिकारसँगै र पारिवारिक बसाइँको आनन्द लिन्छन् ।
“कोदोको ढिँडो, मकै, आलु, स्थानीय कुखुराको मा’सु बढी रुचाउनु हुन्छ”, घरवास सञ्चालक घर्ती मगरले भन्नु भयो । सादा खानाको रु १७० र मा’सुको रु १५० मूल्य तोकिएको छ । यस्तै बास बसेको रु २५० लाग्छ । पे’य पदार्थ र अन्य परिकार खाँदा छुट्टै पैसा तिर्नुपर्छ । यस्तै वडा नं ४ छम्टुमा सञ्चालित सामुदायिक घरवासमा २२ जना पाहुना राख्ने क्षमता छ। “होमस्टेमा ट्राउट माछा सहित स्थानीय खानाका परिकार खुवाउँछौँ”, घरवास सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पदम खत्रीले भन्नुभयो ।
गाउँले जनजीवन, खानपान, घुमफिर र संस्कृतिका हिसाबले ताराखोला धनी छ । ग्रामीण पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धनका लागि घरवास कार्यक्रम प्रभावकारी मानिन्छ। “हामी कहाँ घरवास नै बढी उपयुक्त छ, भ्रमण वर्ष २०७७ लाई लक्षित गरेर घरवासको क्षमता बढाउन लगानी थप्दैछौँ”, गाउँपालिकाका अध्यक्ष घर्तीमगरले भन्नुभयो । उहाँले भ्रमण वर्षमा बढीभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकलाई ताराखोला भित्र्याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पर्यटन प्रवद्र्धन तथा भ्रमण वर्ष सफल पार्न गाउँपालिकाले चालू आवमा रु ७० लाख बजेट छुट्याइएको थियो। उक्त बजेट पर्यटनमैत्री पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारमा खर्च गरिने छ। सडक स्तरीकरण, सरसफाइ, कला, संस्कृतिको संरक्षण, घरवासको स्तरीकरण लगायतका काम भइरहेको छ । पर्यटकीय सम्भावना युक्त भएर पनि पूर्वाधार र प्रचार प्रसार अभावले ताराखोला ओझेलमा छ । व्यवस्थित सडक, पर्यटकीय पूर्वाधार र गन्तव्य स्थलको पहिचान गर्न सके ताराखोलाले पर्यटनमा फड्को मार्ने देखिन्छ । ताराखोलामा पर्यटक भित्र्याउन घरवास कार्यक्रमले टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
घरवासले अन्य गन्तव्य स्थलको समेत उजागर हुनेछ । स्थानीय उत्पादनका हिसाबले पनि ताराखोला परिचित छ । यहाँको मुख्य उत्पादन आलु र भाँगो हो । यस्तै गाईघाटको झरना, डुडेले लगायत दर्जनौँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थल यहीँ पर्छन् । ऐतिहासिक भुस पोल्ने सिस्नो खोस्ने पर्व, असारे मेलाजस्ता मौलिक संस्कृति र परम्परा ताराखोलामा जीवित छन् । बागलुङ सदरमुकामदेखि ५० किमी मोटरयात्रामा ताराखोला पुगिन्छ । रासस